IBallparker: Yenza uqikelelo ngokuLula | Martech Zone
Ballparker: Yenza uqikelelo ngokuLula
NgoLwesithathu, Septemba 17, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
The icandelo lokunika amandla ukuthengisa Iyaqhuma ekukhuleni, kwaye ngakumbi nangakumbi iinkampani ziyaqonda ukuba umsebenzi wentengiso utshintshile kancinci kule minyaka idlulileyo. Ngexesha apho ithemba lifika kuwe, baphanda wena kunye nabantu abakhuphisana nabo kwi-intanethi, baqonde amandla kunye nobuthathaka bakho kwaye bafuna nje ukuya ezantsi kwisindululo.
Elinye icandelo lecandelo leetekhnoloji yokunceda ukuthengisa kukunceda amashishini akhe ngokulula kwaye asasaze uqikelelo, iikowuti, izindululo kunye neempendulo kwii-RFPs (isicelo sezindululo). Kukho inani elikhulayo lezisombululo phaya, ukusuka kwizisombululo zedesktop zeshishini ezidibanisa neLizwi, ukuya kwizisombululo ezinophawu lwentengiso kunye nobuchule kunye nengxoxo, ukuya kwizisombululo ezilula zokuphuhlisa uqikelelo.
Umsunguli uDavid Calvert usebenze kwishishini learhente ngaphezulu kweshumi leminyaka kwaye wabona umsantsa kwimarike yeBallparker. IBallparker liqonga elihle elicocekileyo, eliyilelwe ngokukodwa ukwenza inkqubo yoqikelelo lwemisebenzi enokwenzeka ngokukhawuleza nangokulula. Oku kufezekiswa ngokwenza iqonga lilungele zonke izixhobo zefowuni kunye neekhompyuter zedesktop. Iqonga lihlala lifumaneka nge ilifu, ukuvumela nawuphi na umntu onikwe uxanduva lokwenza uqikelelo ukuba akwenze oko esizeni, kude ne-ofisi okanye emva edesikeni.
Nje ukuba uqikelelo luvelisiwe inokuthunyelwa nge-imeyile kwangoko kwiselfowuni okanye ngasekhohlo ade umntu lowo abuyele e-ofisini. IBallparker ikwanaso nesixhobo sokunika ingxelo esinokwenza uthelekiso nezinye iinkampani ezikumacandelo okanye kwiindawo ezifanayo, ukuze abasebenzisi babone ukuba baqhuba njani ngokuchasene nezinye iinkampani ezifanayo ezisebenzisa le nkqubo.
tags: ibholaUDavid calvertuqikelelo lwesoftwareIsindululo sesoftwaresoftware quotekucatshulwe
Iindlela ezili-14 zokunyusa ingeniso kwiSiza sakho se-Ecommerce